व्यङग्य बिम्मी शर्मा
निर्वाचनको बेला चन्द्रमा पनि नेताहरुको नजिक आउँछ वा देखिन्छ । शायद आँखा तेजिलो भएर होला ? त्यही भएर विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा चन्द्रमालाई सामेल गरेका छन् । नेनेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलीको गोली दाग्दै आगामी पाँच वर्षमा नेपालले चन्द्रमामा रकेट ठाउने भविष्यवाणी गरेका छन् । श्री ओली महोदय कहाँ ज्योतिष बन्नुु पर्नेमा गलत कैरियर रोजेर राजनीतिमा आएर पैसा कमाउनबाट वञ्चित भए । हो राजनीतिमा आएर ठग धन्दाबाट उनी मालामाल त पक्कै भए तथा चर्चित पनि भए । तर उनी हुनु पर्नेचाँहि ज्योतिष नै हो ।
ओली महोदयले अर्को भविष्यवाणी गरेका छन् आगामी पाँच वर्षमा नेपालका काही पनि रहने छैनन् । अब नेपालका सबै गरीबहरुलाई चन्द्रमामा खे ितगर्न र पानीको खोज गर्न पठाइ दिएपछि कहाँबाट बच्छन् त ? न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी । ओली महोदयको दिमागलाई त मान्नै पर्दछ बाई । कति टाढाको सोच्छन् उनी ? साँच्चैका दूरदर्शी अभिनेता हुन् यिनी । जुन देशका जनताले दिवालीमा रकेट बाल्न र उडाउन पाउँदैनन् त्यही देशका दूरदर्शी अभिनेताले चन्द्रमामा रकेट पठाउने क्या रमाइलो कुरा गर्छन् है । महाकवि देवकोटाले भन्या जस्तो ‘उद्धेश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ जस्तै ओलीले आफु आगामी निर्वाचनबाट यो देशको प्रधानमन्त्री भएमा चन्द्रमामा रकेट पठाउने उद्धेश्य राखेका छन् ।
अब यो रकेट दिवालीको बेलामा बोतलमा राखेर पड्काइने फुसफुसे हो कि ओली महाशयले भन्या जस्तै घुसघुसे हो त्यो त पाँच वर्षपछि थाहा होला ? तर अहिले देखि नै ओलीभक्त हनुमानहरु चन्द्रमामा जानकालागि तयारी गर्न थालिसके । रकेटको पुच्छर समातेरै भए पनि यी हनुमानहरु चन्द्रमामा पुग्ने दिवा स्वप्नमा पौडी खेल्दै छन् । स्थानीय चुनावमा ओलीले मोनो रेल र मेट्रो रेलको सपना बाँडेर भोट जिते । राजधानीका जनता मनको लड्डु घीउसँग खाँदैछन् सपनामा मोनो र मेट्रो रेल चढेर । पाँच वर्ष सम्मा जब मोनो रेल र मेट्रो रेल चढेर जनता मतदाता वाक्क हुनेछन् त्यसपछि उनीहरुले रकेट चढ्ने छन् त्यो पनि चन्द्रमामा जाने । मिल्ने भए नेपालका जग्गा दलालहरुले अहिले देखि नै चन्द्रमाको जग्गा प्लटिगँ गरेर बेच्न शुरु गरी सक्थे होलान् ? तर अहिले ओली महोदयको बालकोट कारखानामा रकेट बन्न शुरु नभइ सकेकोले बिचराहरु हातमा हात बाँधेर बसेका छन् । कुन दिन ओलीको उखाने बोलीले हरियो झण्डा देखाउँछ अनि रकेट बनेर हामी सबै फुरुरु त्यही रकेटमा चढेर चन्द्रमाको यात्रा गर्ने छौं । त्यहाँको सडक त पक्कै कच्ची न होला नत्र आकाशगँगामा दुर्घटना हुन बेर छैन हाम्रो । त्यो बेला कसले उद्धार गर्ला हाम्रो ? कि सिधै स्वर्ग पुगिने हो ?
हाम्रो देशका नेताहरु स्वपनद्रष्टा हुन् त्यसैले यस्तो सपना हेर्छन् जुन सम्भव नै छैन । असम्भव सपना हेर्नु र जनता पनि त्यसैलाई हेर्न कर गराउनु हाम्रो देशका नेताहरुको विशेषता हो । जुन विशेषता अरु देशका नेताहरुमा विरलै पाइन्छ । हावाबाट बिजुली, सोलारबाट बिजुलीको सपना हेरेर हामी ब्यूँझे कै थिएनम् ओली महोदयले हाम्रो सपनाको रिल तकिया मै आएर बढाइ दिए । ताकि हामी उठेर उनले बाँडेको सपनाको यथार्य र भ्रमको बारेमा कुनै खोजबिन नगरौं । जनताले प्रश्न गर्न थालेपछि नेतालाई गार्हो हुन्छ । सक्ने भए ओली महाशयले देशका जम्मै नागरिकको थुतुनो काटेर आफ्नो मात्र राख्थे होलान् ? तर के गर्नु देशमा कैँची बन्दैन र पो । त्यसैले त बोलीको गोली चलाइ रहन्छन् उनी ।
नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य अनि उसले आफ्ना मतदातालाई आकर्षित गर्न चन्द्रमालाई रोजेको छ । सूर्य तातो चन्द्रमा चिसो, अनि सूर्य दिउसो उदाउने चन्द्रमा राति उदाउने । यसरी एक अर्काको समानान्तर रहेका ग्रह र उपग्रहहरुलाई ओली ले एउटै घर अर्थात आफ्नो पार्टीमा ल्याइदिए । त्यो कम्ताको ठूलो कुरा हो र ? नेकपा एमालेले माओवादीसँग एकता र सहकार्य गरेर जसरी विपरीत बग्ने हावालाई एउटै पाइपमा घुसाउने काम गरेको छ त्यस्तै हो सूर्यको चन्द्रमासँग मिलन । ओलीले केही दिन अघि कमरेड प्रचण्डसँग एउटै माला लगाएर गलामा गला मिलाउँदै सहकार्य गरे त्यसले सूर्य र चन्द्रमाको मिलनलाई अर्थयाएको छ । सूर्य त आगोको डल्लो हो त्यसलाई छुने र त्यहाँ रकेट कसले पुर्याउने ? त्यसैले शितलता बर्साउने चन्द्रमामा नेपालले रकेट पठाउने भविष्यवाणी गरेर भविष्यमा हनिमुन मनाउने जोडीलाई अहिले देख नै काउकुती लगाइ दिएका छन् रकेटमा चढेर मह खाँदै चन्द्रमामा पुग्नुको मज्जा प्रेमी जोडीलाई बाहेक अरु कसलाई थाहा हुन सक्छ र ?
त्यसैले अरु देशका अभिनेताहरु सिनेमा बनाउँछन् अनि हाम्रो देशका ओली जस्ता नेता कम अभिनेता बढीहरु सपना बनाउँछन् र देखाएर आफ्ना मतदातालाई मुर्ख बनाउँछन् । मतदाता मुर्ख र अन्धा छन् त्यसैले त ओली जस्ता नेताले थुतुनोमा राखेर बोलीको गोली चलाइ रहन्छन् । मर्ने कोही हैनन् क्यार मात्र केहीबेर ओली विदुषकको उखान, टुक्का सुनेर हाँस्छन् र रमाइलो गर्छन् । देशको राजनीतिमा कति गम्भीर नेता मात्र हुनु ? कसै, कसैले कामेडी पनि त गर्नु पर्यो नि बाबै । तो लगे रहो ओली भाइ ।